बहसः माधव नेपालको रक्सी–बियर नखाऊ भन्ने अभिव्यक्तिले उब्जाएका यी प्रश्न « Sutra News
बहसः माधव नेपालको रक्सी–बियर नखाऊ भन्ने अभिव्यक्तिले उब्जाएका यी प्रश्न
१ मंसिर २०७८, बुधबार १३:०२
हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूनिकटका पत्रकारहरूको एक कार्यक्रममा उनीहरुलाई रक्सी नखान चेतावनी दिएको आमसञ्चारमा सार्वजनिक भयो । उनको अभिव्यक्तिबारे तथ्यगत रूपमा केही भन्नैपर्ने देखिएको छ । यदि कुनै पनि दलको मुख्यनेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार व्यक्तिले हठात् मदिराजन्य वस्तु नखाऊ भन्न सुहाउने विषय होइन ।
नेपाल सरकारले पनि यस्ता रिसर्चका लागि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई रकम दिँदै आएको छ । यस्तो प्रावधानहरु चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ । एकपटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेका नेता नेपाललाई कि चाहिँ केही थाहा छैन भन्ने बुझ्नुप¥यो, होइन भने यो त बचपना हो नि ! जस्तो कि सरकारले थाहा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने पदार्थहरूलाई खुला राखेको हुन्छ किनभने त्यो राजस्वको स्रोत हुन्छ।
यसरी हेर्दा खेरि माधव नेपाल अलि हावादारी मान्छे रहेको स्पष्ट भएको छ। महाकाली सन्धिका बेलामा एमालेले बिजुली बेचेर खर्बौ कमाइ हुन्छ भनेजस्तै बचपना सोचाइ प्रेरित देखिन्छ यो अभिव्यक्ति ।
देशको अर्थतन्त्र चल्ने करबाट हो, त्यसमा पनि अन्तःशुल्कको ठूलो योगदान छ। पब्लिक ट्रेजरीको स्रोत के हो भन्नेतर्फ कुनै पनि नेताहरुले ख्याल गरेको पाइँदैन।
नत्रभने ११–१२ प्रतिशत राजश्व आइरहेको सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति माधव नेपालले दिने थिएनन् ।
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार १३:०२
गृह मन्त्रालयको उर्दी- नो फोटो, नो भिडियो
भारत गणतन्त्र दिवसः जनवरी २६ मा किन गरिन्छ भव्य परेड आयोजना ?
प्रचण्ड पत्नी सीताले छाडिन् अस्पताल